Tobanka Dal ee ugu dhaqaalaha badan dunida Sanadkan 2019 – Bandhiga
Dalka dunida ugu dhaqaalaha badan waa Maraykanka oo booskaas kujira tan iyo 1920-kii. Waxa uu dhaqaalaha dunida hormuud u yahay muddo 100sano ku dhow. Dhaqaalaihiisu waxa uu kor u dhaafayaa $21Trillion sannadkan. Waana dalka alaabta ugu badan dibadda kalasoo daga.
Kaalinta Labaad waxa kujira Shiinaha oo samaynaya kobac dhaqaale oo ballaaran. Waana dalka la rajaynayo in shanta illaa tobanka sano ee soo socota uu kala wareego Maraykanka hogaanka dunida. Dhaqaalaha Shiinuhu waxa uu dhan yahay $14Trillion. Sannad walba ku dhawaad 7% ayaa ku kordha.
Kaalinta Saddexaad waxa kujira Japan oo ah dal aad u warshado badan oo waxsoosaarkiisu meel walba gaaray. Japan wax macdan ah maleh, balse waxa ay hodan kutahay waxsoosaarka warshadaha. Dhaqaalaha dalku waa $5Trillion.
Kaalinta Afaraad waxa kujira Wadanka ugu hodansan qaaradda Yurub ahna hormuudka reer Yurub ee Jarmalka. Dhaqaalaha Jarmalku waa in dhan $4Trillion. Waana dal aad u waxsoosaar badan. Ku hormaray tiknoolajiyadda iyo gaadiidka. Waana qaaraan bixiyaha ugu weyn qaaradda Yurub. Waana hogaanka Midowga Yurub.
Kaalinta Shanaad waxa kujira oo sannadkan soo galay wadanka Hindiya oo noqday dalka Shanaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Waa dalka la rajaynayo saddexda sano ee soo socota inuu noqdo dalka ugu dadka badan dunida. Dhaqaalaha dalku waa $2.9Trillion.
Kaalinta Lixaad waxa kujira UK iyadoo lagala baxay booska shanaad sannadkan. UK ayaa muddo badan kamid ahayd wadamada ugu dhaqaalaha badan dunida. Dhaqaalaheedu waa $2.8Trillon.
Kaalinta Todobaad waxa kujira wadanka Faransiiska. Faransiika ayaa samaynaya kobac dhaqaale oo gaabis ah. Dalkan samaaynta ballaaran kuleh Afrika ayaa kamida todobada dal ee ugu warshadaha badan caalamka. Dalkan ayaa leh dhaqaale gaaraya $2.7Trillion.
Kaalinta Sideedaad waxa kujira wadanka Talyaaniga oo kamida afarta dal ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda Yurub, ahna dal kamida wadamada tododobada ah ee nidaamka warshadaha ku hormaray. Dalkan dhaca xeebta Koonfureed ee Yurub ayaa haysta dhaqaale dhan $2.2Triion.
Kaalinta Sagaalaad waxa kujira wadanka Brazil oo ah awoodda dhaqaalaha Koonfur Ameerika. Waana dal kamida wadamada G-20-ga. Dalkan ugu baaxadda weyn Laatin Ameerika ayaa haysta dhaqaale dhan $1.9Trillion.
Kaalinta Tobonaad waxa kujira dalka labaad ee dunida ugu baaxadda weyn waa Canada. Dalkan dhaca Waqooyiga Ameerika ayaa ah dal dad ahaan iyo dhaqaale ahaanba isu dheellitiran. Waana dal hodan ku ah waxsoosarka warshadaha. Waana xubin kamida todobada dal ee Warshadaha ku hormaray. Dhaqaalihiisu waa $1.8Trillion.
Haddii aad danayso arrimaha dhaqaalaha la wadaag saaxibadaa xogtan la xiriirta. Nagusoo biir si aad qoraallo xogo badan xambaarsan u heshid.